भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको संङ्ख्या १८ लाख नाघ्यो – NepalajaMedia
August 3, 2020 117
एजेन्सी, १९ साउन । भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ लाख नाघेको जनाइएको छ । गत २४ घण्टामा भारतका ५२ हजार ९७२ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको संख्या १८ लाख ३ हजार ६९६ पुगेको त्यहाँको केद्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ ।
Prevपछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय १८ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुग्यो
Nextदेशभर ३ सय ५८ संक्रमित निको भए, कुल १४ हजार ९ सय ६१ जना निको भए
यी चार राशिहरूलाई मानिन्छ भाग्यमानी राशि, तपाईंको कुन हो ?
भर्खरै लद्दाख पाकिस्तानको क’ब्जामा, भारतमा खैलाबैला, नेपालले जस्तै पाकिस्तानले निकाल्यो नयाँ नक्सा ! (हेर्नुहोस भिडियो)